Heat isibhamu isetshenziswa ukufudumeza amakamelo ezihlukahlukene. Ngokuvamile kuba igalaji, workshop, okugcinwa, njll Heater has eziningi eziwusizo obungenakuphikwa, yingakho ngokuvamile sisetshenziswa ikhaya workshop kanye emagalaji. Manje thina ukubhekana umklamo isibhamu ukushisa, futhi ake sixoxe isimiso yokusebenza iyunithi. Kodwa bahlole nhlobo ukulungisa isibhamu ukushisa. Iphuzu liwukuthi hhayi ukuthi kuyinkimbinkimbi futhi, ngakho-ke, lo msebenzi kungenziwa ngesandla.
On isimiso isinyathelo
Fan heater ukufudumeza isibhamu ngokuthi ngoba okufanayo yokusebenza isimiso, kodwa nge umehluko ambalwa. Ingqikithi kunjalo agcinwayo: emoyeni sidlula Ukushisa isici, lapho kuze lokushisa ethile. Uma ukujovwa nge ukusakaza kanzulu ekamelweni. Umklamo sihlinzekela inzwa ekhethekile, ngakho lapho sizama ukufinyelela egumbini elilungile lokushisa ukushisa isibhamu sivaliwe, ngaleyo ndlela esindisa nophethiloli. Yiqiniso, njengoba u-diesel isetshenziswa, nakuba ababazi dala amadivayisi ukuthi usebenza qeda kanye injini uwoyela yokudlulisela. Futhi, zikhona igesi ukushisa isibhamu, kodwa okwengeziwe ukuthi kamuva. Ngakho, lolu hlobo heater has a lot of ubuthakathaka, kanjalo ngezikhathi ezithile zidinga ukulungisa. Kuyini lokhu? Ngokuvamile kuba esikhundleni fan, ukuhlanza Imibhobho esemzimbeni, njll Ukuze uqonde ukuthi izindawo abasengozini kakhulu, kubalulekile ukubhekana ukwakhiwa.
mayelana idivayisi yakho
Heat isibhamu, kungakhathalekile uhlobo fuel namandla, ifakwe bezinhlamvu metal, ezivikela ukushaya yiziphi izinto ku Ukushisa isici noma Blower, okungaholela nemiphumela engathandeki ezifana umlilo noma ukwehluleka imishini. Kumele kube fuse samanje. It ngokuzenzakalelayo ikhubaza isibhamu uma okweqile. Leli bhokisi lensimbi ibekwe a sikaphalafini kanye iziteshi kuholele diesel. Kungasetshenziswa for kokunikeza compressor encane noma futha, ukuze nokusakazwa komoya - a Blower bese umlandeli. Isimanga siwukuthi kodwa ngokuvamile fan ehluleka. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu eziningi. Sizozama ukuthola indlela ukuvimbela zokugwema ukuphuka, futhi kanjani ukukulungisa.
Khona-ke into ukhonkolo ayikwazi ukukhuluma. Njengoba umkhuba ubonisa, ungakwazi ukugqashula ngokuphelele yimuphi komklamo, ngakho ngokushesha iso futhi akachaziwe. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ngezinye izikhathi umsebenzisi umane alihambisani imithetho yokusebenza imishini Ukushisa, kwezinye izimo, behluleka ISIZINDA wemfanelo ngenxa ongaphakeme izinga ugesi. Ekugcineni, yonke imininingwane kanye umhlangano abe nokuphila nenkonzo yawo, ngemva kwalokho ukwehluleka singenzeka nganoma yisiphi isikhathi. Ngokwesibonelo, ukukhanda isibhamu ukushisa yenzelwa muva nje, amasevisi ukusebenza kule nsiza. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu uma uma idivayisi ngaphansi kwesiqinisekiso. Uma kungenjalo, ungakwazi azame ukuthola isibhamu ekhaya. Kodwa akubona bonke abantu uthenga ukushisa isibhamu esisha, futhi isebenzisa i ubudala, abangayiqondi indlela okusebenza ngayo.
Zokulungisa heater ubudala
Kwaba nale nqubo abese kufanele ngokuvamile ukubhekana nazo. Kodwa-ke akukho lutho olungalungile, njengoba idivayisi kwezibhamu ezishisayo lilula, ngakho ngolwazi sakugcina ubunjiniyela kagesi, uzokwazi ukuba sibhekane nale umsebenzi. Ngesikhathi kwenziwa elula we isibhamu ukushisa umzimba metal, ngaphakathi okuyinto kukhona sebuningini Ukushisa izakhi (heater), kanye compressor ngoba afundwa emoyeni. Ukuze ulungise lokushisa usebenzisa isikhethi, "imishini" ngaphansi. Asikhulume ngokuningiliziwe ngendlela yokulungisa isibhamu ukushisa iyonke noma iyiphi izakhi ngokwehlukile. Njengoba ojwayelekile, ukunikeza umkhiqizo elidala kuya esitolo akwenzi mqondo. Izindleko of kabusha imisebenzi lizophakama, kodwa izinga kuyangabazeka kakhulu.
Ukulungisa udizili ukushisa isibhamu
Okuvame kakhulu imbangela yokwehluleka iba i-heater. Hlola ukuthi kungenzeka ukuba Ucwaningo. Uma isibhamu ukushisa akusho ukushisa emoyeni noma alenze ingaphumeleli, kunengqondo ukucabanga ngakho. Kodwa njengoba design inikeza iqembu Ukushisa izakhi, sizoba prozvanivat ngamunye futhi unqume ukuthi iziphi wabo sinqamukile. Kufanele kuqondwe ukuthi ngokwalo heater emoyeni hhayi alungisa futhi akuyona walulama, ngakho uma ehluleka, khona-ke kuyomelwe bashintshe ngokuphelele.
Ukuze proring kudingeka usebenzise njalo ukufakwa kokumqoka kuphela inkomba futhi umhloli. Kulokhu, imikhondo, kuyinto efiselekayo ukunqamula. Ngezinye izikhathi amapuleti Ukushisa element kuthiwa elicibilikile noma zikhubazekile udonga lwangaphandle. Kulokhu, esikhundleni kungaba kwenziwe ngaphandle kokulibala.
Uma sibhekene ukwehluleka motor fan, isimo luyindida kancane ngaphezulu. Nquma umonakalo lokhu ulula - akukho ukugeleza ohlangothini air efudumele. Kufanele kuqondwe ukuthi kukhona ingozi zokugwema ukuphuka of heater, njengoba kungukuthi selehlile futhi kalula overheat.
umsebenzi wokulungisa kufanele ziqalise ukuhlolwa ukucindezeleka phezu ezikhumulweni. Uma kudingeka, oxhumana nabo kudingeka ukuba zihlanzwe. Okulandelayo kufanele ukuya phambili motor emazombezombe. Nokho ukufakwa kokumqoka kuphela umhloli akukho usizo kakhulu, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa idivayisi esinembile, njengemoto multimeter noma analog umhloli. Kulesi okwengeziwe aqinisekisiwe yi emazombezombe ukwahlukanisa. Uma wehla core, kulesi simo-ke kulula ukushintsha imoto ngokuphelele. Kunoma yikuphi, kuzoba kusheshe futhi kube lula.
Ukulungisa Ukushisa igesi inganono
Lolu hlobo ashisayo ifakwe sikaphalafini ekhethekile. Lokho ngokuvamile kubangela kuyinto. Ngokwesibonelo, uma negesi yomoya-mpilo engasetshenziswa akuyona oluvuthayo, kungenzeka kunjalo kule injectors. Kufanele zisuswe, nishaye air onomfutho noma hashaza Umfutho, bese ifakwe emuva. Ayikho inhlansi a pezorozzhigom ukungasebenzi. Kulokhu, ukuhlanza oxhumana noma umane esikhundleni Piezo. Uma kunjalo kuyinto iphutha kulesi sifunda-amadlambi, bangakwazi asuswe isakhiwo nhlobo, kodwa kulokhu iyunithi uzobe ucishiwe ngesandla. Kufanele kuqashelwe ukuthi kancane fan heater Elidala lalungiswa onobuhle ezintsha eziningana kulula. Lokhu kungenxa yokungabi inani elikhulu nezinto zikagesi. Ngokwesibonelo, uma ukulungisa okwenziwe ezishisayo Master Guns, uzodinga imishini ekhethekile ukuhlola izifunda kagesi.
Mayelana Fan esikhundleni
Lapha sinawo kancane futhi ukubhekana neqiniso ukuthi isibhamu ukushisa okunjalo. Master of ukulungisa imishini ongenza ngenani elincane imali, kodwa ezimweni eziningi lesi kuwumsebenzi nokwenzeka kuwo wonke umuntu. Ngokuvamile kudingeka abhekane fan, njengoba lesi sici is kunazo wadalula yokuguga olunzulu. Njengoba ezikhathini eziningi kudingeka sibhekane nokutubeka izintambo futhi namachibi zabo, ukukhanda kungenzeka, kodwa ukwehluleka ezifana umonakalo mechanical ezibucayi noma ukuwohloka kudinga esikhundleni motor. Kulokhu, kubalulekile ukuthi kungabi namqondo ukulungisa. Heat isibhamu udizili "Kraton" noma yimuphi omunye ifakwe abalandeli ephansi amandla. Kufanele ukhetha esekelwe ukusebenza imishini. Kunoma ikuphi, azikho izidingo ezikhethekile, ungasebenzisa ngisho encane fan yasendlini, ngaphandle-ke, bakwazi uvumelane bayifaka izindlu.
Njengoba ubona, ungenza bebodwa futhi ukulungisa igesi ukushisa izibhamu, kanye udizili noma kagesi. Endabeni usebenzisa njengendlela udizili noma igesi yemvelo okokuqala ledzingekako zonke ukuhlola isimo sikaphalafini kanye iziteshi yokudla. Uma sibhekene isibhamu kagesi ke cishe kunjalo koxhumana ukuthi kwaphulwa, zishiswe noma oxidized. Konke lokhu aqede, into esemqoka kunalokho elula fast - ukuze banesifiso kancane isikhathi free. Empeleni, konke ongasitshela ngale ndaba. Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini engase yonakale, futhi indlela yokulungisa isibhamu ukushisa.
Plate ukushisa "Ridan": ezibekiweko lobuchwepheshe
Upende ukushisa ukumelana for izoso: indlela engcono ukukhetha?
Indlela ukukhetha Regulator for the okokubilisa: Uhlolojikelele emakethe futhi nokubuyekezwa abakhiqizi
Zokushisela rectifier nedivayisi yayo
The best efrijini mpo: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa amamodeli nokubuyekezwa abakhiqizi
Zucchini: The best izinhlobo ongaphandle. Incazelo nezici ukutshala izinhlobo
Vula laceration emlenzeni futhi ingalo ingaluqedi. ukwelashwa ukulimaza. Kuyini isilonda?
Esakhelwe ngaphakathi imethrikhi - intela ukuze imfashini noma isidingo?
Hatchback "Opel Astra Umndeni" - a anolaka "indoda nomndeni"
Ukucabanga Lateral njengoba isihluthulelo sempumelelo
Ikhishi Imibala "lime": umbono walokho okubizwa ngokuthi ingaphakathi namanzi
Izinhlelo Computer ukuze qhuba: yini okufanele zibikwe umqashi?
Ukuvula mpikiswano phezu "Aliekspress"? Ulwazi mayelana impikiswano ku "Aliekspress"
INdodana Madonna futhi Gaya Richi: isithombe
Strawberry UMargarita. ukulungiselela kahle